डाउनलोड गर्नुहोस् Anime Wallpaper को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (10.28 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् Anime Wallpaper,
41 सुन्दर एनिमे वालपेपर फाइलहरू तपाईंसँग छन्। यदि तपाईंलाई एनिमे वालपेपर चाहिन्छ भने, तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। Softmedal टोलीको रूपमा, हामीले तपाईंको लागि इन्टरनेटको सबैभन्दा सुन्दर एनिमे वालपेपर छविहरू कम्पाइल गरेका छौं। एकल rar फाइल डाउनलोड गरेर, तपाईं 41 सावधानीपूर्वक चयन गरिएको एनिमे वालपेपर फाइलहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमे वालपेपर फाइलहरूसँग, तपाइँ तपाइँको इच्छा अनुसार तपाइँको डेस्कटप / ल्यापटप पीसी र मोबाइल उपकरणहरूको पृष्ठभूमि सजाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईको मनपर्ने एनिम क्यारेक्टरहरू र अन्य एनिमे वालपेपर छविहरू तपाईको डेस्कटप पृष्ठभूमिमा ल्याउने बारे कसरी? एनिमे वालपेपर प्याकेज जुन हामीले एनिमे प्रेमीहरूको लागि सावधानीपूर्वक तयार गरेका छौं पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको एनिमे वालपेपर rar फाइल डाउनलोड गर्नु हो। यसो गरेर, तपाईं सजिलैसँग एकल rar फाइल मार्फत ठीक 41 एनिमे वालपेपर फाइलहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
एनिमे के हो?
एनिमे एक जापानी चित्र को कला हो। छोटो र लामो रेखाचित्रहरू समावेश भएको एनिमे बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो मंगासँग मिल्दोजुल्दो छ, एनिमेका रेखाचित्रहरू मंगा भन्दा सरल छन्।
यसलाई एनिमे चित्रकलाको रूपमा चिनिन्छ, जुन जापानको लागि अद्वितीय छ। मङ्गासँग मिल्दोजुल्दो विशेषताहरू भएका एनिमहरू मङ्गा भन्दा बढी स्पष्ट रूपमा कोरिएका हुन्छन्। एनिमेमा रेखाचित्र प्रविधिलाई महत्त्व दिइन्छ। एनिमको पनि एक अद्वितीय रेखाचित्र प्रविधि छ। तदनुसार, anime मा मान्छे को आँखा ठूलो र उज्यालो कोरिएको छ।
हात चित्रकला को अतिरिक्त, कम्प्यूटर रेखाचित्र पनि एनिम किस्महरु मा प्रयोग गरिन्छ। एनिमे कुनै पनि विषयको लागि विशिष्ट हुन सक्छ। सामान्यतया साना केटाकेटीहरू एनिमे हेर्न रमाइलो गर्छन्। शैक्षिक र कमेडी एनिमहरू साना बच्चाहरूको लागि बनाउन सकिन्छ। वयस्क एनिमे पनि बनाउन सकिन्छ। आजकल, समकालीन एनिमे सामान्यतया अग्रभूमि हो। एनिमेलाई प्राथमिकता दिइन्छ किनभने यसमा सानो बजेट छ।
एनिमे विधाहरू के हुन्?
कोडोमो: यो प्रकारको एनिमेसन सामान्यतया साना बच्चाहरूको लागि छोटो अवधिको स्केच एनिमेसन हो। यस प्रकारको एनिमेले बच्चाहरूलाई सही अवधारणाहरू बुझाउने लक्ष्य राख्छ।
Chibi: कमेडी तत्व साना बच्चाहरु को लागी तैयार यी एनिम विधाहरु मा सामने आउँछ। यी एनिमहरू सामान्यतया टिभी श्रृंखलाको अन्त्यमा बाहिर आउँछन्।
Shounen: यी एनिमे विधाहरू, जसमा कमेडी तत्वहरू र लडाईका दृश्यहरू सँगै प्रयोग गरिन्छ, युवाहरूलाई अपील गर्दछ। यी एनिमहरूमा मुख्य तत्व प्रायः पुरुषहरू हुन्।
सेनेन: यी एनिमहरू प्रायः कामुकता समावेश गर्दछ। लक्षित दर्शकलाई १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका पुरुष भनिन्छ।
Shoujo: यी एनिमहरू, 10-18 वर्षका केटीहरूका लागि तयार पारिएका, रोमान्टिक घटनाहरू र भावनात्मक विषयवस्तुहरू समावेश हुन्छन्। यी एनिमेमा मुख्य पात्रहरू केटीहरू हुन्।
Josei: दैनिक जीवनको बारेमा एनिमे। यस प्रकारको एनिममा, पुरुष र महिला बीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गरिएको छ।
Ecchi: यी एनिम किस्महरूमा नग्नता र कामुकता अग्रभूमिमा छन्। कमेडी र कामुकताको उच्च खुराक भएका एनिमहरूमा पनि कमेडी तत्वहरू हुन्छन्।
Harem: Harem animes कामुकता जगाउन। एकल पुरुष वरिपरि धेरै महिला पात्रहरू छन्।
हेन्टल: यस प्रकारको एनिमले प्राय: कामुकता समावेश गर्दछ। यो सबैभन्दा नाफा कमाउने उद्योगहरु मध्ये एक हो।
एनिमी कसरी बनाउने?
एनिम उत्पादन, जुन धेरैले मन पराउँछन् र हेर्छन्, निपुणता चाहिन्छ। एनिमे उत्पादन भइरहेको बेला, स्टुडियो टोलीले पहिले बैठक राख्छ। पछि, यो निर्धारण गरिन्छ कि कसरी श्रृंखला यसको मुख्य लाइनहरु संग निर्माण गरिनेछ।
कथानक र anime को पाठ्यक्रम पनि निर्धारण गरिन्छ। परिदृश्य तय भएपछि, स्टोरीबोर्ड तयार हुन्छ। थप रूपमा, एनिमे किस्महरूको कुनै न कुनै स्केचहरू कागजमा सिर्जना गरिन्छ। एनिमको लागि स्टोरीबोर्डमा रेखाचित्रहरू बनाइएपछि, रंगीन प्रक्रिया गरिन्छ। यी सिर्जना गरिएका रेखाचित्रहरू प्राथमिकतामा निर्भर गर्दै, डिजिटल मिडियामा पनि स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। यो एनिमे पनि निर्देशक पछि आवाज छ। पहिलो ज्ञात एनिमे 1958 मा प्रसारित भएको थियो।
एनिमेस बारे जानकारी
आज, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका एनिमहरू छन् जुन बच्चाहरू र वयस्कहरू दुवैले मन पराउँछन् र हेर्छन्। यी प्रकारका एनिमहरू तिनीहरूका विषयहरू र तिनीहरू तयार गर्ने तरिका अनुसार एक अर्काबाट अलग छन्। त्यहाँ वयस्कहरूको लागि विभिन्न प्रकारका एनिमहरू छन् साथै अठार वर्ष भन्दा बढी उमेरका लागि एनिमहरू छन्।
बच्चाहरु को लागी तैयार एनिमे किस्महरु हास्य तत्वहरु समावेश गर्दछ। थप रूपमा, बच्चाहरूको लागि तयार गरिएको एनिमे किस्महरू उनीहरूको शैक्षिक सुविधाहरूको लागि पनि परिचित छन्। एनिमे भेरियन्टहरूमा मंगा भन्दा हल्का रेखाचित्रहरू छन्। थप रूपमा, यो कार्टुन श्रृंखला मध्ये एक हो जसमा एनिमे प्लट सबैभन्दा सटीक र अनुक्रमिक रूपमा बनाइएको छ।
फाईल आकार: 10.28 MB
पछिल्लो अद्यावधिक: 05-05-2022
Artpip लाई डेस्कटप पृष्ठभूमि परिवर्तक अनुप्रयोगको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जुन तपाईंले आफ्नो...
सुसाइड स्क्वाड वालपेपरहरू एक वालपेपर प्याक हो जुन तपाईंलाई मन पर्न सक्छ यदि तपाईं आफ्नो मोबाइल...
एप्पलले भर्खरै आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप आईफोन7को साथ बल प्रदर्शन गर्यो। iPhone7एक शक्तिशाली...
CGWallpapers एउटा वालपेपर प्याक हो जुन तपाईं आफ्नो कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरूको लागि नयाँ...
HTC 10 Wallpapers एउटा वालपेपर प्याकेज हो जसले HTC को नयाँ फ्ल्यागशिप HTC 10 बाट वालपेपर फाइलहरू...
Samsung Galaxy S7 Wallpapers एउटा वालपेपर प्याकेज हो जसमा Samsung Galaxy S7 मा प्रयोग हुने आधिकारिक...
माइक्रोसफ्टले आधिकारिक रूपमा सेप्टेम्बर 2014 को अन्त्यमा Windows 10 प्रस्तुत गर्‍यो र एक दिन पछि...
Samsung Galaxy Note7Wallpapers एउटा नि:शुल्क वालपेपर प्याकेज हो जसमा वालपेपर फाइलहरू समावेश छन्...
iOS9वालपेपर प्याकेज एउटा वालपेपर प्याकेज हो जसले तपाईंलाई विभिन्न यन्त्रहरूमा iOS 9, एप्पलको...
Android Marshmallow Wallpapers एउटा वालपेपर प्याक हो जसले Google को भर्खरै घोषणा गरेको एन्ड्रोइड...
Google Pixel Wallpapers नयाँ Google Pixel फोनको स्क्रिनमा देखिने वालपेपरहरूसँग सिर्जना गरिएको एउटा...
एन्ड्रोइड ओ वालपेपर एक वालपेपर हो जुन तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरहरूमा भर्खरै...
iOS 11 Wallpapers प्याकेज एउटा वालपेपर प्याकेज हो जसले तपाईंलाई iOS 11 को लुक, Apple को नवीनतम...
वालपेपर इन्जिन एउटा वालपेपर कार्यक्रम हो जसले एनिमेटेड, लाइभ, एनिमेटेड वालपेपर विकल्पहरू प्रायः...
iOS 8 HD Wallpapers एउटा प्याकेज हो जुन iPhone र iPad मालिकहरूले नि:शुल्क डाउनलोड गर्न र वालपेपरको...
LG G5 Wallpapers एउटा वालपेपर प्याकेज हो जुन तपाईं आफ्नो मोबाइल उपकरणमा LG G5 मा वालपेपर विकल्पहरू...
सबै आईओएस वालपेपरहरू एक वालपेपर प्याक हो जुन काममा आउन सक्छ यदि तपाईं आफ्नो मोबाइल उपकरणलाई थप...
41 सुन्दर एनिमे वालपेपर फाइलहरू तपाईंसँग छन्। यदि तपाईंलाई एनिमे वालपेपर चाहिन्छ भने, तपाईं सही...
MotoGP थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता एशियाली देशहरूमा लोकप्रिय खेल...
वालपेपर 1920x1080 (वालपेपर) को रूपमा परिभाषित दृश्य फाइलहरू हुन्। वालपेपरहरू डेस्कटप इन्टरफेससँग...
मस्जिदहरू (मस्जिद), जसलाई विश्वभरका २ अर्ब मुस्लिमहरूले पवित्र स्थानको रूपमा स्वीकार गरेका छन्,...
Softmedal टोलीको रूपमा, तपाईंले 4K अल्ट्रा HD गुणस्तरमा कुकुर वालपेपरका चित्रहरू डाउनलोड गर्न...
हामीले हाम्रा स्मार्टफोनहरूलाई निजीकृत गर्न सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। ती मध्ये एक र सबैभन्दा...
Windows7Starter Wallpaper Changer एउटा नि:शुल्क वालपेपर परिवर्तक हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई...